Cumar Xasan Al-Bashiir: Waa kuma madaxweynihii hore ee Sudan? - BBC News Somali
Cumar Xasan Al-Bashiir: Waa kuma madaxweynihii hore ee Sudan?
Waa kuma madaxweynihii hore ee Sudan?
Inkastoo wax badan aanan laga ogeyn noolashiisa gaarka ah ayaa hadana waxa jirta in Cumar Al Bashiir uusan dhalin wax caruur ah.
Markii ay da'diisu gaartay 50 jir ayuu guursaday xaaskii labaad oo ahayd haweenay Carmal ahayd oo uu qabi jiray Ibraahim Shams Al-din oo loo arko geesi dagaal yahan ah, waxaan guurkaasi uu ku dhiiri galinayay in la guursado dumarka garoobka ah ee ay geesiyaashu ka dhintaan.
Madaxwennaha Suudaan Omar AL-Bashir ayaa waqtisgiisa ku dhamaysatay dagaal oo Suudan waxaa uu ku qabsaday afgembi militari sannadkii 1989-kii. Xukunkiisu wuxuu noqday ilaa sannadkii 2011 mid ka mid ah xukumada ugu adag Africa.
Image caption Al Bashir
Amarka xirigga Al Bashir wuxuu sababay mamnuucida safaradiisa caalamiga ah, hasa yeeshee wuxuu safaro diblmaasi uu ku tegay wadamada Masar, Sacuudi Carabiya iyo Koonfur Afrika, inkastoo markii dambe lagu qasbay in uu si dagdag ah uga baxo Koonfur Afrika bishii Juun ee sannadkii 2015, kadib markii la sheegay in la tix galiyo dhaqan galka amarka maxkamada ee xariga Al Bashiir.
Hogaamintiisii ka hor wuxuu ahaa taliyaha ciidanka ,waxana uu hogaaminayay hawlagaladii koonfurta ee lagaga soo horjeeday hogaamiyihii hore, jabhada John Garang.
Waxaa jiray heshiisyo nabadeed oo uu la saxiixday Garang.
Image caption Dhibaatooyinkii ka dhacy Darfuur ayaa lagu eedeeyay
Dembiyada ay ICC u heysto Cumar Xassan Al-Bashir
Dembiyada maxkamadda ICC-da ay u heysato madaxweyne Al Bashir ayaa kala ah dil, shirqool, barakicin, kufsi iyo jirdil, waxaana sidoo kale jirta dembiyo dagaal oo ay kamid tahay weerarkii uu ku qaaday shacabka deggan gobolka daarfur.
Dilka xubno k tirsanaa qoomiyadaha Fur, Masalit iyo Zaghawa
Jirdil iyo dhaawac loo gaystay qoomiyadaha
Barakac iyo cawaaqib xumo uu u gaystay qoomiyadahan
Hadafkiisa ugu wayn wuxuu ahaa ilaalinta Suudaan oo mid ah, halka aftida iyo tirakoobka koonfurta Suudaan ay qayb ka ahayd wada xaajoodkii geedi socodkii nabadda.
Hasa yeeshee kacdoonnada siyaasadeed ee dhawaan ka dhacay dalkaasi ayaa yeeshay horumar. Dibad baxyada looga soo horjeedo xukunka Al Bashir ayaa bilawday bilowgii bishii Disembar ee sannadkii 2018 ka dib markii ay dawladda ku dhawaaqday in qiimaha shidaalka iyo rootiga uu kici doono.
Dibadbaxayasha ayaa dalabkoodii isu badalay in Mr Al Baashiir iyo xukumadiisu ay xukunka ka dagaan. Boqolaal ruux ayaa ku dhintay dibadbaxyada intii ay socdeen, halka boqolaal kalena xabsiga loo taxaaabay.
Balse dalabka shacabka kadib, waxaa uu madaxweyne Al Bashir bishii Febraayo uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah, isaga oo sidoo kale isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada oo waxa uu dhammaan badelay guddoomiyayaasha gobollada, xubno ka tirsan ciidamada, halka uu dhagaha ka fureystay dalabkii shacabka ee ahaa in uu xilka baneeyo.